Nhengo dzeMDC Nhatu Dzinotongerwa Kugara Mujeri kweMakore Makumi Maviri
MDC Trio Sentenced
Dare repamusoro reHigh Court ratura mutongo wekuti nhengo dzeMDC-T nhatu dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlen View muHarare dzipike makore makumi maviri mujeri.
Mutongi wedare repamusoro, VaChinembiri Bhunu, vati vatura mutongo wekuti nhengo dzeMDCT nhatu idzi dzinoti VaTungamirai Madzokere, VaLast Maengehama naMuzvare Yvvonne Musarurwa, vapike kwemakore makumi maviri pamhosva yavakabatwa nayo yekuponda mupurisa Inspector Petros Mutedza mumusha weGlen View muHarare muna 2011.
Mumutongo wavo, VaBhunu vati vemapato ezvematongerwo enyika havafaniri kuita zvemhirizhonga vakati matare haazoregedza kutura mitongo yakawomarara.
Vatiwo mapato ezvematongerwo enyika anofanira kutevedzera zvaanenge audzwa nemapurisa kana achinge arambidzwa kuratidzira vachiti vezvematongerwo enyika vakaregedzwa vachiratidzira pamadiro zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana hondo chaiyo.
Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo pavasungwa ava pasiri kunyatsozivikanwa kuti ndiyani akakanda dombo rakatema VaMutedza zvakakonzera kuti vafe, vaona zvakakodzera kuti vasatongerere VaMaengehama naVaMadzokere rufu vachiti mumwe wevasungwa ava, Muzvare Musarurwa, munhu akachengetedzwa nebumbiro idzva remitemo kuti vasatongerwe rufu.
Mumwe wevakabatwa nemhosva, VaPhineas Nhatarikwa, avo vaishanda semutyairi kuMDC-T panguva yakapondwa VaMutedza, vatongerwa kuti vakagare mujeri kwemakore matatu asi mutongo wanzi usendekwe parutivi kwemakore mashanu. VaNhatarikwa vanzi vabhadhare mari yefaindi madhora mazana mashanu.
VaMaengehama vambofenda mudare panga pachiturwa mutongo uyu. VaBhunu vapedza kutura mutongo uyu, Muzvare Musarurwa vabva vatanga kudaidzira mudare vachiti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vachabva pachigaro chete kunyange zvikadii.
Zvichakadai, munyori mukuru mu MDC-T, VaDouglas Mwonzora, vati mutongo waturwa naVaBhunu une chekuita nezvematongerwo enyika.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC-T, Muzvare Thokozani Khupe, vati sebato havasi kuzobvuma kutyisidzirwa kuti vasaratidzire nematare avati ari kushanda pamwe chete neZanu PF.
Zvichakadai, rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava, Amai Beatrice Mtetwa, vazivisa dare kuti vachapikisa mutongo waturwa naVaBhunu uyu.
VaBhunu vati dare richagara zvakare neChipiri richinzwa chikumbiro chekuti vasungwa vambopihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vakamirira kupikisa mutongo waturwa nedare.
Dare iri ranga rakazara nevanhu vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi uye vamwe vevanhu ava vanga vachisanganisira vatevedzeri vaVaTsvangirai vanoti Amai Khupe, VaElias Mudzuri pamwe naVaNelson Chamisa nevamwe vakuru-vakuru muMDC-T.
Pakatanga nyaya iyi, vasungwa panyaya iyi vaiva makumi maviri nevapfumbamwe asi vasungwa vana ava ndivo vakazobatwa nemhosva yekuponda VaMutedza.
Vasungwa ava vairamba mhosva iyi vachiti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.